Nepal Trending, Author at NepalTrending
गंगा दाहालको ओलीलाई प्रश्र- हाम्री आमा भोको पेटमाथि पटुका कसेर समाज परिवर्तनका निम्ति हिड्दै र लड्दै गर्दा तपाई त काठमाडौंमा बयलगाडाका कथा उट्पट्याङ शैलीमा सुनाएर दुनिया हसाँउदै हुनुहुन्थ्यो नि होईन र कमरेड ?’
Nepal Trending — September 21, 2021 add comment
काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा वितरण गरेको विभिन्न मानपदवी र पदकका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गरेको कटाक्षप्रति माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पुत्री गंगा...	Read more »
राष्ट्र, गणतन्त्र र संविधान बचाउन माओवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
Nepal Trending — September 20, 2021 add comment
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्र, गणतन्त्र र संविधान बचाउन र संविधान विरोधीहरुको षडयन्त्रलाई परास्त गर्नका लागि माओवादी शक्तिहरु एक हुनुपर्ने बताउनुभएको...	Read more »
माओवादी केन्द्र छाडेका चितवनका दुई ठुला नेता फेरि मूल पार्टीमा नै फर्किए, प्रचण्डले गरे स्वागत !
Nepal Trending — September 19, 2021 add comment
चितवन । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र छाडेका चितवनमा दुई नेता फेरि ने.क. पा माओवादी केन्द्रमा नै फर्किएका छन् । चितवन रत्ननगर जयमंगलाका रमेश रेग्मी ‘अमर’ र इच्छाकामनाका बाबुराम पोखरेल आज संविधान दिवसको...	Read more »
प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाललाई मानपदवीद्वारा विभूषित गरिने !
काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर नौ सय तीन जनालाई विभिन्न मानपदवी र विभूषणप्रदान गर्न लागेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएकालाई मानपदवीद्वारा विभूषित लागिएको हो । सय पटक सरकारले...	Read more »
कमेडी च्याम्पियन सिजन–२ काे विजेता भरतमणि पौडेल
Nepal Trending — September 18, 2021 add comment
काठमाडौं । इलामका भरतमणि पौडेलले रियालिटी सो ‘कमेडी च्याम्पियन-२’ को उपाधि जितेका छन्। विक्की अग्रवाल र सन्तोष थापालाई हराउँदै पौडेलले शनिबार राति भएको फाइनलमा उपाधि जितेका हुन्। पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, पूर्व युवराज...	Read more »
Nepal Trending — September 17, 2021 add comment
बुटवल । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेको हरेक कमिटीबाट विद्रोह हुने बताएकी छन् । बुटबलमा आयोजित लुम्बनी प्रदेशस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै झाँक्रीले कतिपयले आफूलाई चुनौतीरहित ठानेको बताइन् ।...	Read more »
काठमाडौँ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले रामबहादुर थापा ‘बादल’ पेट पाल्नकै लागि ओली समूहमा लागेको टिप्पणी गरेका छन्। अन्तिमसम्म मझधारमा उभिएर फुटपछि ओलीतिर उभिएका थापाप्रति भुसालले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।...	Read more »
अनिष ओकिलीको ‘सरिताको दिदी’ नामक बोलको गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमान्डौं । कुनै बेलाको लोकप्रिय साङ्गीतिक समूह ‘ओकिली’का गायक अनिष ओकिली लामो समयपछि दर्शक तथा श्रोतामाझ आएका छन् । उनले आफ्नो अफिसियल युट्युब च्यानलमार्फत ‘सरिताको दिदी‘’ शीर्षकको गीत सार्वजनिक गरेका छन्। गीतमा...	Read more »
पार्टी प्रबेशको लहर सुरु ! जुम्लामा एमाले र कांग्रेस पार्टी त्यागेर २७ जनाले गरे माओवादी केन्द्रमा प्रवेश
काठमाडौँ । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा २७ जना नेता कार्यकर्ताले नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका छन् । मंगलबार पटमारा गाउँमा आयोजित कार्यक्रम उक्त गाउँका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवेश गरेका हुन्...	Read more »
प्रचण्डले भने: माओवादी मात्रै देशभक्त पार्टी हो, जनताले बुझिसके
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी मात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई माया गर्ने र देशभक्त पार्टी भएको जनताले बुझिसकेको बताएका छन् । प्रचण्डले पोष्टबहादुर बोगटीको सातौं स्मृति सभामा बोल्दै...	Read more »